Nkọwa ngwaahịa |
Nnwale & Nyochaa ngwaahịa
LANTAISI TS30 bụ chaja ụgbọ ala ikuku ngwa ngwa nke dabara na ngwaọrụ niile enyere Qi nke nwere mkpuchi dakọtara Qi.
site admin na 21-03-12
一, Ọdịdị Analysis 1, Front nke igbe The oghere na mfe n'ihu igbe, nwere ike e mere maka OEM ahịa. 2, Back nke igbe The azụ igbe na-egosi mkpa iwebata na nkọwa. Ntinye: DC 5V-2A, DC 9V-1.67A mmepụta: 10W Max. Size: 116*96*90mm Agba:□ Black □ Ọzọ 3, Mepee igbe Op...
Nyocha chaja ụgbọ ala ikuku 15W
site admin na 21-01-13
N'oge a, ọtụtụ ekwentị mkpanaaka na-akwado teknụzụ ịchaji ikuku, ọrụ a nke chaja ikuku na-ewetara ndị ọrụ ahụmịhe chaja ngwa ngwa na adaba. Iji mee ka ọrụ chaja ikuku dị ike karị, ndị na-emepụta na-agbasi mbọ ike na chaja ikuku ikuku.
site admin na 20-12-24
Ugbu a, ọtụtụ ekwentị mkpanaaka na-akwado ọrụ chaja ikuku teknụzụ dị jụụ, nke na-ewetara ndị ọrụ ahụmịhe chaja dị mma na ngwa ngwa. Iji mee ka ọrụ chaja ikuku nke ekwentị mkpanaaka dịkwuo ike, ndị na-emepụta zọọkwa n'ahịa chaja ikuku, malite ...